'दुबो र फूलमा मन थाम्न सक्दैनौँ हामी’ | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more 'दुबो र फूलमा मन थाम्न सक्दैनौँ हामी’
‘दुबो र फूलमा मन थाम्न सक्दैनौँ हामी’	जब व्यापारीले अङ्गालाका अङ्गाला फूल ओसार्न भ्याए...
फागुन १५ गते, २०७६ - १४:५२
काठमाडौं । यसपालीको महाशिवरात्रिमा पशुपतिनाथ परिसरलाई फूल र प्रकाशले सजाउने सोँच आयो । अनि तत्कालै एउटा प्रश्न पनि तेर्सियो– बाँदरबाट कसरी जोगाउने होला ? त्यही पीरमा बसिरहेको थिएँ, फूलले त सजाउने तर शिवरात्रि पछाडि कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ? अर्को प्रश्न आयो । त्यस प्रश्नमा मेरो पहिलो जवाफ थियो– पहिले फूलको सौन्दर्यको आनन्द त लिउँ, सौन्दर्यको आनन्द लिनुभन्दा पहिल्यै फोहरको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा किन दिमाग खर्चिनु ? अब थाहा भयो, हाम्रा यी दुवै प्रश्न चिन्ता लिनै नपर्ने खालका रहेछन् । भगवान् श्रीपशुपतिनाथसँग प्रार्थना गर्दछु, हामीलाई सद्बुद्धि दिनुहोस् ।
यस वर्षको महाशिवरात्रिको समयमा पशुपतिनाथमा गरिएको सजावटका फूल चोरिएको विषयमा सामाजिक सञ्जालमा चर्चा परिचर्चा बढेपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा प्रदीप ढकालले आफ्नो फेसबुक वालमा लेखेका छन् । महाशिवरात्रिको भोलिपल्ट उनले लेखेको यो फेसबुक स्टाटस् बडो अन्तक्र्रियात्मक देखिन्छ । ठीक त्यति नै बेला पवित्र पशुपतिनाथमा बडो आकर्षकरुपमा सजाइएका फूल चोरीका विषयमा नेपालका आमसञ्चारमाध्यममा पनि चर्चा भइरहेको थियो ।
“आज बिहानै मन्दिर क्षेत्र पुग्दा निकै नमज्जा लाग्यो, दिक्क पनि लाग्यो । किन हामी यसरी सुन्दरतालाई लुछ्न उद्यत् हुन्छौँ भन्ने भावना मनमा आयो । जुन बाँदरको यसअघि हामीले चिन्ता गरेका थियौँ, ती ठाउँका फूल सुरक्षित छन् तर हामी मान्छेको हात पुग्ने ठाउँका फूल चाहिँ कतै पनि बाँकी छैनन् । पुग्न नसकिएको ठाउँमा चाहिँ लुछेर फूल चुँडिएको देखिएको छ । केही समयअघि तीनकुनेमा दुबो चोरेका हामी झन् फूलैफूल भएको ठाउँमा त कसरी पो चुप लाग्न सक्थ्यौँ र ?’ सदस्य सचिव डा ढकाल महाशिवरात्रिको भोलिपल्ट मन्दिर क्षेत्र पुगेपछि यो लेखेका छन् ।
पावन पशुपति क्षेत्रलाई फूलैफूलले सजाउने कोषको यो सोंचमा सहयोग गर्ने दाता थिए भारतीय नागरिक सञ्जीव सिपा र चेतन हाडा । उनीहरुले फूलले पशुपति सिँगार्न सहयोग गरेका थिए । “सजावटका लागि प्राविधिकसमेत भारतबाटै ल्याइएको थियो । फूल कम्तीमा पनि १५ दिन ताजा देखिने गरी रु पाँच करोडको लागतमा फूल ल्याएर साजसज्जा गरिएको थियो । फोममा पानी राखेर फूल सजाइएकाले बाँकी रहेका फूल अहिले पनि ओइलाएका छैनन् ।” कोषका कार्यकारी निर्देशक डा घनश्याम खतिवडाले बताए ।
कोषले बनाएको योजनाअनुसार १५ दिनसम्म फूलको साजसज्जाले ढाकिएको पशुपतिमा दैनिक लाखौँ पर्यटक आउने थिए । तर दर्शनार्थीका रुपमा पशुपति क्षेत्र प्रवेश गरेका भक्तजनका कारण त्यो अवसर गुमेको छ । भ्रमण वर्ष भएकाले यसपटक संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराई नै महाशिवरात्रि मूल समारोह समितिको अध्यक्ष बसेका थिए ।
महाशिवरात्रिमा सजावट गरेपछि रामनवमी, अक्षय तृतीया, साउनको सोमबार, तीज, बाला चतुर्दशीलगायत पर्वमा अझ बढी प्रभावकारीरुपमा प्रकाश एवं फूलको व्यवस्था गर्नुपर्ने चुनौतीसमेत कोष सामु खडा भएको छ । कोषका सदस्य सचिव डा ढकाल आगामी दिनमा पनि पशुपतिमा सजावट गरिने जानकारी दिनुहुन्छ । आमसञ्चार माध्यममार्फत प्रचारप्रसार गरी अर्कोपटक फूल चुँड्नेलाई कानूनी कारवाहीकै प्रक्रियामा अघि बढाइने सोँच बनाएको जानकारी पनि उनले दिए ।
पशुपतिको सजावटलाई २४ घण्टाभित्रै ध्वस्त बनाएपछि मानव अधिकारवादी तथा सफाइ अभियानकर्मी उत्तम पुडासैनीले सामाजिक सञ्जालनमा लेखे, “हामी बद्लियौँ, तर हाम्रो सोच बदलिएन, अधिकारको वकालत ग¥यौँ तर कर्तव्यको पालना गर्नै जानेनौँ, आफूलाई माया गर्न जान्यौँ तर माटोको माया गर्न सिकेनौँ, अबको पुस्तालाई सभ्यता, संस्कृति र स्वाभिमानका बारेमा सिकाऔँ ।”
केही मानिसले रमाइलो एवं घर सजाउने लोभमा फूलका थुङ्गा चुँड्दा केही व्यापारीलेसमेत अङ्गालाका अङ्गाला फूल ओसार्न भ्याए । पुरानो बानेश्वरकी कमला नेपाल केही मानिसले भारीका भारी फूल चोरेर लगेको आफूले देखेको सुनाउछिन् । उनले भने, “फूल पसलेले यसरी फूल ओसारेको देख्दा मन कटक्क खायो, मन्दिरमा चढाएको फूल पनि नछोडेको देख्दा बडो अचम्म लाग्यो ।”
प्रायः सधैँजसो बिहान पशुपतिनाथको दर्शन गर्न पुग्ने रामचन्द्र अर्याल भन्छन्, “दुबो र फूलमा मन थाम्न नसकिएको हो, भगवान्लाई चढाइने श्रद्धाको प्रतिकका कारण पनि मानिसको मन लोभिएको हुनसक्छ ।” शिवरात्रिको भोलिपल्टै पशुपतिनाथ पुग्दा आफूलाई पनि निकै खिन्नता भएको उनले सुनाए ।
फागुन १५ गते, २०७६ - १४:५२ मा प्रकाशित